10600nm CO2 Lasera orinasa - China 10600nm CO2 mpamokatra Lasera, mpamatsy
Hatsaran-tarehy fitsaboana 10600nm azo entina amin'ny laser fandidiana co2 an'ny veterinary Z15A
Ny fitsaboana laser amin'ny laser amin'ny laser co2 voaisy tombo-kase, ny halavan'ny 10600nm, ny taratra laser infrared tsy hita maso dia miavaka amin'ny hakitroky kely sy avo. Ny fitrandrahana laser amin'ny alàlan'ny fitaratra mifantoka, ny teboka ifantohan'ny tavy kendrena dia afaka mamokatra hafanana hafanana ambony, azo ampiasaina amin'ny fanapahana, fandoroana.
Co2 laser maharitra maharitra marika rafitra fanesorana ny hoditra Z25A
sela misy pigment raha tsy misy fiantraikany amin'ny sela manodidina azy, izay mampihena ny fotoana fanasitranana ary mampiroborobo ny fizotry ny hoditra voajanahary amin'ny famoronana sela vaovao sy salama kokoa.
Ny fanesorana ny freckle, ny fitsaboana laser amin'ny hoditra Laser Laser Z15C
fitsaboana pulsa dia fomba azo antoka sy tsy manafika izay ahafahanao mahita indray ny hoditra vaovao sy mahasalama noho ny hatsaranao.
Laser miisa co2 azo zahana ho an'ny fanesorana ny Z15B
ny pulse dia mizarazara fa manasitrana mafy ireo sela pigment épermermal taloha nefa tsy misy fiantraikany amin'ny sela manodidina azy,
40W RF Fractional CO2 Laser Generator manamafy ny famafana ny famafana ER700C
Laser laser miisa 30W miato voaisy tombo-kase CO2 Laser ER700B
fitsaboana tapaka iray izay mamokatra tsanganana kely lalina sy an'arivony amin'ny hoditrao, antsoina hoe faritra fitsaboana mikraoba. ny pulse dia mizarazara fa manasitrana mafy ireo sela pigment épermermal taloha nefa tsy misy fiantraikany amin'ny sela manodidina azy,
40w Co2 Fractional Laser Vaginal Fanamafisana ER800A
Ny masinina dia manana rafitra 3: Fractional CO2, VRL ary CO2, afaka manome fahafaham-po ny filàna rehetra, fampiasam-bola tena tsara fitsaboana azo antoka.
10600nm Fractional CO2 Laser dia iray amin'ireo lasera be mpampiasa indrindra ampiasaina amin'ny dermatology kosmetika, mandaitra amin'ny holatra mony, pigmentation, freckles, tsipika tsara ary ny fihenan'ny fikorontanana.